သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဂြိုဟ်သားကို တွေ့ရှိကြပြီလော? - Burmese Edition | Sunthit Myanmar
Home News သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဂြိုဟ်သားကို တွေ့ရှိကြပြီလော?
သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဂြိုဟ်သားကို တွေ့ရှိကြပြီလော?
ကြယ်တွေကြားထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို တစ်ချို့က လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် အာကာသလေ့လာသူတွေကတော့ ဆေးလိပ်တိုပုံစံရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ကြပြီး ဂြိုဟ်သားဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
စက်တီအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ သုတေသီတွေက ဂြိုဟ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်ကိုရှာဖွေနေကြပြီး အူမူဝါမူအ လို့ခေါ်တဲ့ တယ်လီစကုပ်နဲ့ လေ့လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အောက်တိုဘာလမှာ ဒီပစ္စည်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းပစ္စည်းဟာ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့သာယူဆရပြီး ဒီနေအဖွဲ့အစည်းမှာ တွေ့ရတဲ့ ၎င်းပစ္စည်းဟာ တစ်ခြားဂြိုဟ်ကနေရောက်လာပုံရပါတယ်။ ၎င်းပစ္စည်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အာကာသထဲကကျောက်တုံးတစ်တုံးသာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပြီး ၎င်းဟာ ဆေးပေါ့လိပ် အရွယ်ပမာဏခန့်ရှည်လျားလာပြီး မီတာတစ်ရာရှည်ကာ အရွယ်အစားဟာ ဆယ်ပုံတစ်ပုံခန့် လောက်ရှိတဲ့အတွက် တစ်မူထူးခြားနေပြန်ပါတယ်။
မီတာ ၄၀၀ လောက်ရှည်တဲ့ ၎င်း နီမှောင်မှောင်ကျောက်တုံးဟာ ဘယ်ကလာပြီး ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ တိကျပြီး တူညီတဲ့အဖြေ တော့မရသေးပါဘူး။ ပေါင် ၇၅ မီလီယံ ကုန်ကျခံ ပြီးလုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဆက်တီ ပရောဂျက်က ကြယ်တာရာတွေ ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို နားထောင်တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာက “ဆေးပေါ့လိပ်တို (သို့) အပ်ပုံစံ အနေအထားရှိတဲ့ ဝတ္ထုဟာ ကြယ်တာရာတွေ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေ နဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေကြောင့် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားပြီး သေးသွားတယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့ အာကာသတွင်းလေ့လာရေး သုတေသန အဖွဲ့က အကြံပြုထားပါတယ်။”
“သဘာဝအတိုင်းရှိရမယ့် ကြယ်တာရာဟာ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အားလုံးသော သဘောတူညီချက် မရှိသေးပါဘူး။ ကြယ်တာရာတွေ ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို နားထောင်တဲ့ အဖွဲ့ ဟာ တယ်လီစကုပ်နဲ့ နေရာအတိအကျကို ချိန်ထားပြီး ၎င်းပစ္စည်းကို ရှေ့ခေတ်လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သာယူဆကြပါတယ်။”
၎င်းအဖွဲ့ဟာ ဂရင်းဘန်း ရေဒီယို တယ်လီစကုပ်နဲ့ အနောက်ဗာဂျီးနီးယား ကနေ ဆေးလိပ်တို ပုံစံ ပစ္စည်းကို လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂြိုဟ်သားတွေရှိတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်တဲ့ နည်းပညာကို ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးပေမယ့် အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ ဓါတ်ငွေ့တွေနဲ့ ရေရှိမရှိဆိုတဲ့ အချက်အလက်ကို ဒီ လေ့လာမှုကနေ သိရလိမ့်မယ်လို့ သုတေသီတွေက မျှော်လင့်ကြပါတယ်။
ကြယ်တာရာတွေ ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို နားထောင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကြယ်တွေကို စစ်တမ်းရယူသွားမှာဖြစ်ပြီး အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ဂလက်ဆီ ၁၀၀ ကနေ ဂြိုဟ်သားရှိမှု မရှိမှုဆိုတဲ့ အချက်ကို ရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၀ ကနေစပြီး လုပ်လာခဲ့တဲ့ ဆက်တီ ပရောဂျက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်ထိ သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သက်သေမပြနိုင်သေးပါဘူး။
သိပၸံပညာရွင္ေတြ ၿဂိဳဟ္သားကို ေတြ႔ရွိၾကၿပီေလာ?
Previous article သင့်ကို ဂရုစိုက်တာကို သိစေသောနည်းလမ်းများ
Next article ဂျပန် ဧကရာဇ်သည် လာမည့် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့တွင် ထီးနန်းစွန့်လွှတ်တော့မည်